Munamato kuMhandara yeGuadalupe. ? Kudzivirirwa, Amparo uye Chishamiso
Munamato kuMhandara kubva kuGuadalupe simudza nekutenda uye kubva pamoyo chiito chekuzvininipisa chinoburitsa manzwiro ekuti moyo wemunhu unofanirwa kukumbira rubatsiro kubva kuzvisikwa zvemweya.
Kunyangwe inguvai yatiri kupfuura panguva ino, minamato inoitwa kuti ikwane vanhu vanoshaya.
Hapana chinhu chisingagoneke kana isu tikatora munamato chishandiso chekurwira hondo idzo kuenda nhasi kunotipa isu zuva nezuva.
Tinogona kubvunza izvo zvatinoda uye kunyangwe izvo zvinhu zvazove zviroto nezvishuvo zvedu uye izvo zvichiramba zvakachengetwa mukati memweya wedu uye izvo zvisina mumwe asi isu tichiziva.
1 Munamato kuMhandara yeGuadalupe Ndiani Mhandara yeGuadalupe?
1.1 Munamato weMhandara yeGuadalupe yekudzivirirwa
1.2 Munamato wekukumbira kuchengetedzwa kweMhandara yeGuadalupe
1.3 Mhandara yemunamato weGuadalupe kukumbira chishamiso
Munamato kuMhandara yeGuadalupe Ndiani mhandara yeGuadalupe?
Iko kuoneka kweMhandara Maria muna 1531 muMexico.
Izvo zvinozivikanwa kuti wekutanga kumuona aive iye Indian Juan Diego achiri munzira yeku misa.
Inotaurira nyaya iyo mhandara yakamukumbira kuti vavake tembere uye vape meseji kuvanhu vese vanogona kutanga naBhishopi.
MuIndian Juan Diego akazviita, zvese zvaakapihwa kwaari, zvaisave nyore nekuti hapana akamutenda nekuti, serese chishamiso, zvaive zvakakodzera kuti vaone chimwe chiratidzo chekuti zvakataurwa nemuIndia ichi ichokwadi.
storia kuti mhandara yakamukumbira kuvaka tembere uye izvo kuendesa meseji kune vanhu vese zvichiitika kutanga nabhishopi.
MuIndia Juan Diego akadaro, zvese zvaakange akapiwa, zvaive zvisiri nyore nekuti hapana munhu aimutenda nekuti, sechishamiso chero chipi zvacho, zvaidikanwa kuti chimwe chiratidzo chionekwe kuti zvaitaurwa nemuIndia ichokwadi.
MuIndia anogamuchira chirairo chitsva kubva kuMhandara kwaakapihwa basa rekutarisa maruva ari pamusoro pegomo, iye zvakare anoteerera odhi uye anotsvaga roses nyowani kuti avaise kuna bhishopi akaputirwa gumbeze, Kana maruva akawira pamusoro pegumbeze, mufananidzo unozivikanwa nhasi seMhandara yeGuadalupe inogona kuoneka unoratidzwa.
Nhasi, basilica yeSanta María de Guadalupe ndiyo yakave yakashanyirwa tembere yezvechitendero pasi rese.
Kufungidzira kwe mamirioni mazana maviri veparamende Vanouya gore rega rega kuti vatore kutenda kwavo uye vopa mutero kuMhandara iyi inoshamisa.
Munamato weMhandara yeGuadalupe yekudzivirirwa
Vakakomborerwa Mhandara yeGuadalupe, Amai vaMwari, Mukadzi uye Amai vedu. Huya pano unamate pamberi pechifananidzo chako chitsvene, icho iwe chawakatisiira takamanikidzwa paJuan Diego's tilma, sechisungo cherudo, kunaka uye ngoni.
Mashoko awakataura kuna Juan nehunyoro husinga tsanangurike achiri kutinhira: "Mwanakomana wangu anodikanwa, Juan wandinoda sediki uye akapfava," apo, uchipenya nerunako, iwe wakaonekwa pamberi pemaziso ake pachikomo cheTepeyac. Ita kuti tikodzere kunzwa iwo iwo mazwi akafanana mukati-kati memweya yedu.
Ehe, uri mai vedu; Amai vaMwari ndiamai vedu, vanyoro, vane tsitsi.
Uye kuve amai vedu uye kutigarisa pasi pejasi rekuchengetedza kwako, iwe wakagara mumufananidzo wako weGuadalupe. Vazhinji Vatsvene Mhandara yeGuadalupe, ratidza kuti iwe ndiwe Amai vedu.
Tidzivirirei mumiyedzo, nyaradzai mukusuwa, uye mutibatsire pazvinhu zvedu zvese.
Mune njodzi, muzvirwere, mukutambudza, mune shungu, mune kusiiwa, muawa yekufa kwedu, titarise nemeso ane tsitsi uye usambofa watiparadzanisa nesu.
Mhandara Maria, saamai vakanaka, inoziva nzira yekupa yakasimba dziviriro uye ichokwadi kune vese avo vanomuziva saamai.
Kusvika kwaari uchitsvaga kuchengetedzwa chiitiko chekutenda, akashinga uye akatendeseka. Tinogona kukumbira dziviriro panguva dzese dzatinoda isu, yemhuri kana shamwari.
Kune kunyange avo vanoshandisa izvi munamato Kune zvimwe zvinhu zvekunyama, chimiro chemunamato ichi chingaite kunge chisakanyanya asi amai vanoziva maitiro ekuchengeta mwana wavo uye nezvese zvake.
Hatigoni kuenda kwaari ndichifunga kuti haakwanise kutibatsira asi nemoyo wakashama kutaura nesu uye kutitungamira kune izvo zvatinofanira kuita nguva dzese.
Munamato wekukumbira kuchengetedzwa kweMhandara yeGuadalupe
Haiwa Mhandara Isingachinjike, Amai vaMwari wechokwadi uye Amai veChechi! Iwe, unobva panzvimbo ino ratidza tsitsi dzako netsitsi kune vese vanokumbira dziviriro yako; teerera kumunamato uyo nerunyararo kuvimba kwedu tinotaura uye tinopa kuna Mwanakomana wako Jesu, iye chete mudzikunuri.
Amai vengoni, Tenzi wechavanzika uye chinyararire chibairo, kune iwe, unobuda kuzosangana nesu, vatadzi, tinozvinatsa pazuva rino zvese zvatiri uye nerudo rwedu rwese.
Isu tinopira hupenyu hwedu, basa redu, mufaro wedu, hurwere hwedu nemarwadzo edu.
Ipa rugare, Kururamisira uye kubudirira kuvanhu vedu; sezvo zvese zvatiinazvo uye zvatiri kuzviisa pasi pekutarisira kwako, Mai naamai vedu.
Tinoda kuve wako chose uye tifambe newe nzira yekuvimbika zvakakwana kuna Jesu Kristu muChechi yake: usarege kuenda kuruoko rwako rune rudo.
Mhandara yeGuadalupe, Amai veAmerican, tinokukumbira mabhishopi ese, kuti utungamire munzira dzakatendeka dzehupenyu hwechiKristu hwakawanda, rudo uye kushumira Mwari nekuzvininipisa.
Fungisisa izvi goho rakakura, uye rwira kuna She kuti vaise nzara yehutsvene muVanhu vese vaMwari, uye vape kuwanda kwekutaura kwevapristi nevechitendero, vakasimba mukutenda, uye vane godo vanogovanisa zvakavanzika zvaMwari.
Dziviriro, kutarisira, rudo, ndine urombo uye zvese izvo zvaunoshuva kumubvunza, nzeve dzake dzakagadzirira kunzwa arcion yevana vake.
Kutenda ndicho chinhu chakakosha.
Mune mushoko raMwari ivo vanotitsanangurira kuti isu tinofanirwa kukumbira tichitenda kuti kune, ndiko kuti, isu tinofanira kusiya minamato yedu tichiziva kuti ivo vanonzwika uye, zvakatonyanya, vakapindurwa.
Amparo chinhu chakakosha uye mumwe anofanirwa kubvunza kuti kukurudzira kunonzwika kubva pamoyo.
Hatizive ramangwana uye ndosaka munamato uyu wakakosha kusiya mumaoko edu hurongwa hwedu nedanho rega ratiri kuda kutora.
Ndokusaka munamato wemhandara weGuadalupe wakakosha.
Dai kudzivirirwa kwake kurambe kuri muhupenyu hwedu uye kukomborera kwake hakuzombotisiye isu nemhuri uye neshamwari.
Kukumbira kuchengetedzwa kune munhu akasarudzika chiitiko cherudo, hazvidikanwe kubatidza makenduru kana kugadzirira nharaunda yakapfuura pamunamato uyu ungaratidzika kunge uri nyore asi uine simba chaizvo, iwe unongofanira kutenda, hapana chimwe chinhu chakakosha.
Mhandara yemunamato weGuadalupe kukumbira chishamiso
Vakakomborerwa Mhandara yeGuadalupe, Amai uye Mambokadzi wenyika yedu. Pano iwe watinamata tichizvininipisa pamberi pechifanidzo chako.
(Isa yako oda)
Mauri tinoisa tariro yedu yese. Ndiwe hupenyu hwedu nekunyaradza.
Kuve pasi pemumvuri wako wekudzivirira, uye mumakumbo amai vako, hapana chatinogona kutya.
Tibatsireiwo parwendo rwedu rwepanyika uye mutireverere pamberi peMwanakomana wenyu weMweya panguva rufu, kuitira kuti tigowana ruponeso rusingaperi rwemweya.
Zvishamiso ndizvo zvinhu izvo zvatinotenda kuti hazvigoneke kuita nemauto emunhu.
Iri izwi iro rinoshandiswa zvakanyanya mukukumbira kwezvirwere izvo, maererano nesainzi yekurapa, haina mushonga.
Nekudaro, izwi rekuti chishamiso rinogona kushandiswa mune mamwe mamiriro akawanda sekunge mune idzo zviitiko apo isu takamirira mari iyo isingakwanise kusvika kana iyo kunyangarika kweimwe nhengo yemhuri yatambura uye kubva pane imwe nguva kuenda kune imwe kunoratidzika kwakachengeteka uye kwakanaka.
Zvishamiso zviri padyo remunamato uye unongotaura kutenda kudiki. Hapana chinhu chisingagoneke.
Iwe unogona uye unofanirwa kunamatira minamato yese kumutendi uyu.
Chinhu chakakosha ndechekuti munamato weMhandara yeGuadalupe yakanamatwa nekutenda kwakawanda uye nekutenda kwakawanda mukati memoyo wake.
Iwe unosarudza kutenda mumasimba echokwadi emutsvene uyu uye iwe unofanirwa kutenda kuti iye achakubatsira.